यी ४ राशिलाई आज आइतबारको दिन प्रेममा निकै लाभ हुने, कुन कुन हुन्? – Suchana Hub
यी ४ राशिलाई आज आइतबारको दिन प्रेममा निकै लाभ हुने, कुन कुन हुन्?
काठमाण्डौ । हप्ताको पहिलो दिन आइतबार, कुन राशिलाई कति फाप्छ? कुन राशि भएका व्यक्तिहरुको प्रेम प्रसंग राम्रो हुन्छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ :
कर्कट राशि प्रेमको दृष्टिले कर्कट राशिका लागि आइतबारको दिन निकै शुभ रहेको छ। तपाइँका प्रेमि वा प्रमिका भाग्यशाली सावित हुन सक्छन् । प्रेमी प्रेमिकाले आइतबारलाई मधुर बनाउन सक्छन्, तसर्थ सकेसम्म आफ्नो प्रेम ब्यक्त गर्नुस् । सिंह राशि सिंह राशिलाई प्रेमको दृष्टिले आइतबार सबै भन्दा उत्तम मानिन्छ । यो राशिका ब्यक्तिले प्रेम नै प्रेमको अनुभव गर्न सक्छन् । आफ्नो तरिकाले प्रेम ब्यक्त गर्नुस् महौल तपाइँको पक्षमा रहेको छ। प्रेम जीवनको आनन्द लिनुस् ।
तुला राशि आइतबार तुला राशिका लागि प्रेमको दृष्टिले मध्यम छ । तपाइँहरुको बीचमा मतभेद आउन सक्छ । आइतबारको दिन प्रेम ब्यक्त गर्नका लागि सही देखिँदैन । विचार पुर्‍याएर मात्र गर्नुस् । मकर राशि प्रेम जीवनमा पारदर्शी बन्नुस् । साथीत्वलाई बढी जोड दिनुस् । आफ्नो कुरा भन्नुस् आइतबार तपाइँका लागि शुभ हुन सक्छ । विग्रिएका सम्बन्ध पनि बन्न सक्छन् ।
Previous घरमा यी बिरुवा राख्नुभयो भने पैसाको बर्षा हुनेछ
Next यसपाली भाइटीकाको उत्तम साइत कहिले?